श्रीराम राई - Shreeram Rai | Nagarik News - Nepal Republic Media
श्रीराम राईका लेखहरु :
बालसाहित्यः हिजो र आज
पहिलेभन्दा लेखन र पुस्तक उत्पादनको गुणस्तर पनि बढेको हामी अभिभूत गर्न सक्छौं। बालसाहित्यमा देखापरेको विकासले गर्दा प्रतिभाशाली लेखकहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरेको छ र थप पुस्तकहरूको प्रकाशनलाई सम्भव बनाएको छ।
श्रीराम राई १८ पुस २०७८ आइतबार १० मिनेट पाठ
श्रवण मुकारुङ, नेपाली साहित्यकाशको एक परिचित नाम। विशेषतः ‘बिसे नगर्चीको कथा’ कवितामार्फत् देश हल्लाउने सामर्थ्ययुक्त कविता जन्माउने श्रवणको परिचय कवि मात्र हैन, उनी गीतकार पनि हुन्। उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका छन्।
श्रीराम राई २९ मंसिर २०७८ बुधबार १८ मिनेट पाठ
दुबोसरी माया फैलाएका गीतकारको 'खुम्च्याइ'
गीतकारको नाम मिडियामा उच्चारण नहुँदा उनको मन दुख्छ। उनी भन्छन्, ‘गायकगायिका प्रष्ट रूपमा चिनिएर चर्चित हुन्छन् तर गीतकार सधैँ पर्दा पछाडि नै हुन्छन्। गायकगायिकाको नाम अगाडि आएर स्रष्टाको नाम पर्दा पछाडि रहेकोमा उनी गुनासो गर्छन्। त्यसकारण रचनाकार सधैं ओझेलमा परेकोमा उनलाई दुःख लाग्छ।
श्रीराम राई २ मंसिर २०७८ बिहीबार ६ मिनेट पाठ
छैन रहेछ मेरो लागि दुख्ने मुटु पनि
थाहै छैन कता गयौ दोबाटोमा छोडी, जोवन मेरो बितिगयो तिमीलाई खोजी।यो मन दिएँ विश्वास गरें सधैं आफ्नो ठानी, कति हाँस्छ्यौ म रुँदा ढुंगाजस्तै बनी।
श्रीराम राई १२ कार्तिक २०७८ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
बालसाहित्यमा मनोरञ्जन मात्र होइन सन्देश पनि हुन आवश्यक छ
बालसाहित्यको कुनै पनि विधा बालबालिका केन्द्रित भएर लेखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले ती साहित्य पढेर जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो भने हामीले लेखेको सार्थक बन्छ। बालसाहित्यमा मनोरञ्जन मात्र होइन सन्देश पनि हुन आवश्यक छ। यस्ता सिर्जनाको अध्ययनबाट अवश्य पनि बालबालिकाहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ।
श्रीराम राई २ श्रावण २०७८ शनिबार ४ मिनेट पाठ
श्रीराम राई १७ असार २०७८ बिहीबार १ मिनेट पाठ
अहिले लकडाउन छ । यही बेला ह्वातै महँगी बढेको छ । हुँदा खानेहरूको अवस्था नाजुक छ। तर पनि धैर्य गर्नुपर्छ । कुनै पनि समस्या सधैंका लागि आउँदैन, सदैव यो रहँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा यसको प्रभाव केही कम भएको सुनिएको छ । यहाँ पनि अवश्य कम हुँदै जानेछ र फेरि हामी पहिलेकै जिन्दगीमा फर्कने छौं । यस्तै आशमा दिनहरू बितिरहेका छन् ।
श्रीराम राई ३० जेष्ठ २०७८ आइतबार २ मिनेट पाठ
श्रीराम राई २८ जेष्ठ २०७८ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
नागरिकको लापर्बाहीबाट कोरोना फैलिँदै छ
कोरोना महामारीको यो संकटमा बच्न निश्चय नै अटेर गर्न भएन। सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सावधानीका नियमहरू पालना गर्दैै मनोबल उच्च राख्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। सकारात्मक सोच राख्दै पत्रपत्रिकामा, फेसबुकमा कोरोनाबाट मृत्यु भएका मान्छेहरूको लासको थुप्रोबाट नडराई त्यसबाट गतिले पाठ सिकेर स्वअनुशासित बन्नुपर्छ। डाक्टरहरुले दिएका सल्लाह मान्दै खानपान, रहनसहनमा ख्याल पुर्याउनुपर्दछ। त्यसरी उच्च सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कोरोना संक्रमण भयो भने डाक्टरको सल्लाहबमोजिम उपचार गर्नुपर्दछ। त्यसो गरेको खण्डमा यो संकटबाट बच्न सकिन्छ।
श्रीराम राई २१ जेष्ठ २०७८ शुक्रबार ३ मिनेट पाठ
हेर्नुस् त, साहुका परिवारले जनैपिच्छे राहत लगे। यो त धनीको सरकार हो । मालाई बताइदिनुस् न, हामी गरीबको सरकार कहाँ बसेको हुन्छ होला ?
श्रीराम राई १५ वैशाख २०७८ बुधबार १ मिनेट पाठ
फोनको घन्टी बज्यो। अन गर्नासाथ उताबाट आवाज आयो– भीषण, मैले निम्तो कार्ड पठाएकी थिएँ । अझै आइपुग्नु भएन त । मैले तपाईँलाई पराई ठानेकी छैन क्यार ! लोग्नेस्वास्नी पो बनिरहन सकिएन त, साथी बन्न त सन्तानले छेक्दैन नि ।छिटो आउनु यहाँ कार्यक्रम सुरु हुन लाग्यो।
श्रीराम राई २५ चैत्र २०७७ बुधबार २ मिनेट पाठ
मेरी नातिनीले न एक मुठी घाँस काँटी, न कोही माग्न नै आए । यद्यपि ऊ आमा हुँदै छे । समाज भने भनिरहेको छ – समय भाँडियो । विकृति फैलिँदै गएको छ । नातिनीचाहिँ खुसी साथ भन्दै छे – मैले आमा हुन कसैलाईे शुल्क बुझाएकी छु । म जे गरूँ अरूलाई के चासो ? कम्तीमा मैले कसैको दिल त दुखाएकी छुइनँ नि ।
श्रीराम राई ६ फाल्गुन २०७७ बिहीबार १ मिनेट पाठ
अचानक यानीमाया लल्याककलुलुक भइन् । उनले कामदेवलाई न्यानो अँगालोमा बेर्दै भनिन् – साँच्चै हो त नि, कति तड्पिइरहूँ म ! आफ्नो ज्यान आफ्नै अधिकार । कामदेवले पासोमा परेको पन्छीलाई जस्तै आफूखुसी समात्दै भने– कतिञ्जेल बाँचिन्छ र ! खाकोलाको र गरेकै काम लाग्छ । मरेर लानु के छ र ।
श्रीराम राई २६ माघ २०७७ सोमबार १ मिनेट पाठ
श्रीराम राईका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्